जुलुसको तस्बिर लिँदै गर्दा समातेर ड्याम्म ड्याम्म कुटपिट गर्न मिल्छ ? निकेश बराल
अनलाइनको डेस्क, एडमिन सञ्चालन, न्युज पोष्टिङ एवं मल्टिमिडियामा मसँग प्राविधिक ज्ञान र अनुभव भएकाले मैले बेलबारीबाट भर्खरै सुरु हुन थालेको उज्यालो प्रदेशमा यही महिनादेखि रिपोर्टरको जागिर पाएको हुँ । म बेलबारीस्थित कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्न थालेको एक महिना पनि पुगेको छैन । लेखक बन्ने मेरो धोको छ । घर खर्च धान्न पारिवारिक समस्या भएकाले मैले अध्ययन सँगसँगै पत्रकारिता पनि सुरु गरेको हुँ ।
म जस्तो भर्खरै उच्च शिक्षा पढ्दै गरेको सामान्य परिवारको युवकले पत्रकारिता क्षेत्रमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन भोजराज अङ्कल ? आज वा अहिल्यैदेखि मिडियाको अफिसमा जागिर खान मिल्छ कि त्योभन्दा पहिले प्रेस युनियनले चिन्ने भएपछि मात्रै यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइन्छ ?
अनि, मजस्तो भर्खरै पत्रकारितामा आएको रिपोर्टरलाई चाहिँ सडकमा जुलुसको तस्बिर लिँदै गर्दा समातेर ड्याम्म ड्याम्म कुटपिट गर्न मिल्छ ? अन्यथा, प्रेस युनियन मोरङको विज्ञप्तिको अर्थ के हो ? झडपका दिन डेरामा सुतिरहेको व्यक्तिलाई ‘नेविसंघको टाउको काट्ने मोर्चाको अगुवा’ भनेर आरोप लगाउनु आफैँमा जघन्य अपराध हो कि होइन ?
प्रेस स्वतन्त्रताका पहरेदार प्रेस युनियनका केन्द्रीय नेताहरूले यसको जवाफ दिउन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि काठमाडौँदेखि बेलबारीसम्मको मेरो ट्रयाक रेकर्ड हेरोस् ।
बराल वेलवारीमा कार्यरत पत्रकार हुन
थप समाचार - विरोध र्यालीको फोटो खिच्ने सञ्चारकर्मी कुटिए
प्रकाशपुर र बाङ्गेबाट प्रतिवन्धित लागु औषध सहित २ जना पक्राउ
बराहक्षेत्रः सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका १० प्रकाशपुर र बराहक्षेत्र ७ बाङ्गेबाट नियन्त्रित लागु औ ...
उदयपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा १ को मृत्यु, ५ घाईते
उदयपुरः उदयपुरको कटारी नगरपालिका ४ स्थित सिद्दिचरण राजमार्गमा बलेरो गाडी दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत् ...
इहटरीः देशभरीको तथ्यांक हेर्दा सुनसरी जिल्लाको मालपोत कार्यालय इनरुवा जग्गा कारोबारमा एक नम्बरमा परे ...
प्रकाशपुर र बाङ्गेबाट प्रतिवन्धित ल ...
उदयपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा १ को ...
जग्गा कारोबारमा सुनसरी जिल्ला देशकै ...
शिक्षक विद्यार्थीलाई यथाशिघ्र खोपद ...
इटहरीमा संचालित पूर्वाञ्चल एग्रीटेक ...
सुनसरी सहित देशका ९ जिल्ला कोरोना स ...
बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको सबै अ ...